မန်ယူကစားကွက်အရ နေရာမရနိုင်သောကစားသမားနှစ်ဦးကို ရိုင်ယန်ဂစ်ပြော… – FBV SPORT NEWS
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်စဟာ လက်ရှိအနေအထားမှာ ကစားသမားတွေနဲ့ နည်းပြတွေ ဟာ နိုင်ပွဲရယူနိုင်မှု ခြေစွမ်းပိုင်းအနည်းငယ်တိုးတက်လာမှုရှိသော်လည်း ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ဝေဖန်မှုနဲ့ အားကစားကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ ရဲ့ ဝေဖန်မှုများတော့ရှိနေဆဲပါ….
အဲဒီဝေဖန်မှုတွေအပြင် မန်ယူကစားသမားဟောင်း ရိုင်ယန်ဂစ် က ကစားကွက်အရ Line up ထုတ်ရာတွင် နေရာမရနိုင်သော ကစားသမားနှစ်ဦးကို Sport Trible News မှာ ပြောသွားခဲ့ပါတယ်…
ရိုင်ယန်ဂစ်က ” လက်ရှိ မန်ယူကစားကွက် ကို နည်းပြ ဆိုးရှားလ်က ဘယ်လို ကစားခိုင်းလဲကို ကျနော် မြင်မိသလောက်ပြောပြပါမယ်….တသင်းလုံးကို ဘာစီလိုနာကစားကွက်ပုံစံလိုဘဲ…လူပေးကစားပြီး အကွက်ဖော်ကာ နေရာလွတ်တွေဖန်တီးပြီးတော့ ကစားခိုင်းတာမျိုးပါ….အဲ့ဒီမှာ လက်ရှိအင်္ဂလန်မြေမှာကစားနေတဲ့အသင်းတွေ နဲ့တော့အဆင်သိပ်မပြေပါဘူး….
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ပရီးမီးယားလိဂ်က အသင်းတွေအစဉ်အလာတိုင်း အတက်အဆင်းကြမ်းကြမ်းနဲ့ ဖြတ်တင်ဘောတွေ တွဲလုံးတွေကနေ ဂိုးရဖို့ တိုက်စစ်ကိုအသာပေးကစားကြပါတယ်….ဆိုးရှားရဲ့နည်းကို ကျနော်အပြစ်မပြောလိုပါဘူး…ဒါပေမဲ့ အသင်းရဲ့လက်ရှိကစားသမားတွေထဲတော်တော်များများက ဘောလုံးကို ကိုင်နိုင်ပြီးကစားနိုင်တဲ့ သူသိပ်မရှိပါဘူး….နောက်ပြီးတော့ ဘောလုံးကို ဂိုးသမားဆီပြန်ပေးနေတာမျိုး ချဲလ်ဆီးနဲ့ပွဲမှာ ၁၆ကြိမ်ကျော်ပါတယ် မလိုအပ်ဘဲပြန်ပေးတာမျိုးပါ…..
ဖာဂူဆန်လက်ထက်မှာ အဲ့လို ပြန်ပေးတာမျိုးကို ဘယ်တော့မှ မလုပ်ခိုင်းပါဘူး လုပ်မိတယ်ဆိုလည်််းနောက်ပွဲကစားဖို့ မသေချာတော့ပါဘူး…..ကျနော်ပြောချင်တာက ဒီလက်ရှိကစားကွက်အရဆို ကာဗာနီ နဲ့ ဗန်ဒါဘတ်ဟာ နေရာပျောက်ဆုံးနိုင်မယ့်ပုံပေါ်နေပါတယ်…..ကာဗာနီဟာ အမြင့်ဘောတွေကနေ ပြေးနှုန်းတွေကနေ ဂိုးသွင်းယူနိုင်မယ့် တိုက်စစ်မှူးပါ ချဲလ်ဆီးနဲ့ပွဲမှာ ပွဲပြီးခါနီး မိနစ် တော်တော်များများအလိုမှာထည့်ပေးမယ့် အသင်းရဲ့ကစားကွက်ကို သူမခန့်မှန်းနိုင်ခဲ့ပါဘူး….ကစားအသစ်ဆိုပေမယ့် အသင်းရဲ့ကစားကွက်ကို အနည်းငယ်နားလည်နိုင်ရမယ်လေ….ဗန်ဒါဘတ်ကတော့ လက်ရှိကစားကွက်အတိုင်းဆို တော်မီနေး ဖရက်တို့နဲ့ နေရာလုရနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီး ပြောသွားခဲ့ပါတယ်……
ချဲလ်ဆီးနဲ့ပွဲမှာ မက်ဂွားယားလုပ်သွားတဲ့ပုံစံဟာ WWEနပန်းပွဲတွေထဲက အကွက်လို့ အီဗရာ ဝန်ခံ